Anyị na-emikpu onwe anyị n'ezie na usoro "ọhụụ" mgbe a bịara n'ihe gbasara 3D Spatial? - Geofumadas
Ànyị na-emikpu anyị n'ezie na usoro "ọhụụ" mgbe ọ bịara na 3D Spatial?
Septemba, 2017 Geospatial - GIS, innovations, My egeomates
"Ingpị bọtịnụ nwere ike imepe akụkụ ọzọ", dee, ihe fọrọ nke nta na njedebe nke akụkọ ya, Muthukumar Kumar, na-ezo aka kpọmkwem banyere okike nke Gburugburu gburugburu 3D, uru ya, mkpa ya na ọdịnihu.
Mara nke ahụ ka ị ga-ekwu maka ya ọdịnihu, n'ụzọ na - ewepụ anyị ntakịrị nsogbu, a chọrọ okwu a emeju onye ozo (that) ndi ozo na enye ha ike di nkpa na ntukwasiobi nke aka ndi oru anyi choro. Ọ bụ ebe a ka okwu ahụ “ohuru" Ajụjụ na-ebilite: Mgbe a ga-enye “ihe” ihe ọ bụla otutu?
Ntughari ihe bu ihe anakpo
A na-atụ aro ma na-atọ ụtọ nke ukwuu ederede nke jikọtara ozi achọrọ maka okwu a kwuru na “Ntughari uche bu ngbanye nke uwa ato: ahia, teknuzu ya na itinye aka di irè".
Mgbe ị na-esoro ahịrịokwu ahụ na ihe onyonyo gosiri, ekwusiri ya ike na atọ components Ekwesịrị igosi ha n'otu oge na "ihe" ahụ anyị ga - erugo dịka otutu. N'ihi na, dị ka onye edemede nke post mesiri:
“Akụkụ kacha mma n'ime ihe ohuru bụ imepụta ihe, echiche, mkpali na teknụzụ ọhụụ. Agbanyeghị, echiche ndị a bụ akụkụ kachasị ntakịrị nke usoro mmepe. Akụkụ kachasị mkpa bụ emereme, na mmejuputa oru oma. "
Ezigbo ihe. Na-enweghị ogbugbu Ihe nile adighi adi bu nro n’ile anya ibu ezi ihe n’otu ubochi. Ka anyị jụọ onwe anyị mgbe ahụ: know mara ma 'etinyere ihe' n'ihe gbasara “gburugburu” dị na oghere Spenal 3D? Ke mme ikpehe ewe? Na-ahụ ha?
E-e: N'ihi na ịgaghị (ma ọ bụ iji, ma ọ bụ naanị ịmara na ha dị) ha abụọ ArcGis Pro dị ka Qgis2threejs iji mepụta nsonaazụ a na-ahụ anya nke ọma na 3D, ya bụ, na-ekwu maka ọganihu dị na ihe ngosi nke nyocha nyocha; Agaghị ebili (ma ọ bụ na - apụta) mkpa a na - edozibeghị, ma na - eche oge ya ga - apụta.
3D Spatial dika ihe omuma banyere omuma ya na ogba-ama odi n'ihu
Kumar kwuru na “enwere ụfọdụ Mmepe na-adọrọ mmasị ”na 3D Spatial. Ọ kọwara, anyị ga-ahụta n'otu ụzọ ahụ mgbe anyị 'batara onwe anyị' n'ụdị egwuregwu Tanya Nchekwa onwe. Ka anyị tinye ya na ewepụta ọnọdụ ndị a gbanwee ma ọ bụ mepụta ụdị dịgasị iche iche n’ihe anyị na-ahụ kwa ụbọchị dị ka ịdị adị ma dị adị.
Nke ahụ bụ, anyị na-ezo aka ebe a nke ukwuu Ezigbo Okike n'ihe banyere Eziokwu mepere emepe, ubi ebe ihe omuma m nke mbu, amaara m ya, agafeghị na-enye ihe ọmụma. Ọ bụ ya mere dee taa. Echere m na ịgafe ókèala, na-atụgharị uche na "ịmegharị ihe ọhụrụ," na-ekesara gị niile, ndị na-agụ akwụkwọ nwere obi ọma. Anyị ga!
Banyere mmetuta ihe omimi, metaverse na akwukwo ndi ozo
Anyị intuit na emepụta eziokwu Ọ na-ezo aka na akụkọ ifo. Ego o gha eme ga-egosi n'eziokwu bụ na ọ bụrụ na anyị ejiri enyo kọmputa dị mfe na ngwanrọ agbakwunyere ma ọ bụ ngwaọrụ nke anyị mepụtara na mbụ anyị ga-eji nweta ma bie ndụ. Nke ikpeazu bu amamịghe eziokwu, nke onye ọrụ ji ahụ ihe akpali akpali ma na-ebi ndụ dị ka ọ dị adị ụwa akụkụ atọ nke egosipụtara.
La Ezigbo eziokwuN'aka nke ọzọ, ọ na-agbakwunye ihe ndị mepere emepe n'ezie, na-eke gburugburu "agwakọta" n'ime ozugbo na nke anyị anaghị efunahụ kọntaktị na "eziokwu". N'ụzọ dị otú a, egosiri anyị ozi nke anyị na-enweghị ike ịhụ na "ọnọdụ nkịtị" nke ga-eme ka ahụmịhe anyị mma.
Ezigbo ụdị nke imikpu ndị nwere mmasị na akụkọ ederede bụ ndị na-eji ya eme ihe geolocation. Isi ihe dị mkpa ebe a bụ chọpụta obosara nke anyị 'ga-amaba.' Echiche nke metaxe. Aghọtara dị ka ụwa mebere ahụ (ihe atụ maka ezigbo ya) ebe mmadụ na ndị ọzọ na-emekọrịta ihe na-eji a njirimara na-anọchi anya eserese dị ka eserese ma ọ bụ foto a maara avatar.
Ma ọ bụ ezie matriks bụrụ ihe ntụnyere nke ihe ịtụnanya na sinema, nke na-adọrọ mmasị karị, n'anya anyị, bụ nke a Emepụtara maka ebumnuche mmụta iji mụta GIS ma kwuo banyere blọọgụ Esri:
Ibunye iberibe ahu ebe
Kumar na-ezo aka na ọrụ 3, nke ụlọ ọrụ mepụtara Mantle. Anakwere na mmalite ya Egwuregwu Preliminal site na ndị guzobere ya, atụmatụ a bu n’obi ịmepụta egwuregwu ndị na-eji ọdịdị ala egosipụtara na ụzọ atọ nye onye ọrụ ahụ na-anwale ịkọpụta ụdị eziokwu dị egwu. N'oge na-adịghị anya, ha chọpụtara na Ịdị n'Otu, otu egwuregwu mmepe a ma ama ama, enwere ọtụtụ ndị na-eji eserese ngosi. Ọ bụ ebe ahụ ka echiche nke ịmepụta usoro nke ha pụtapụtara ya, Mantle.
Usoro mbu ga - eji onyonyo nke Akwukwo ozi (onye bu nke Mantle), nke bu nke emeghari site n ’udi nke pikselu ya ka o buru“ uzo ”nke ga-aruzi uzo ihe omuma nke obodo n’ileghari ihe ndi ozo n’onyinye nke mbu.
Ha kwuru na enwere ike itinye niche a, iji maapụ na mpaghara dị iche iche na-abụghị naanị egwuregwu. Kumar kọwaazi ihe banyere Brownsville oru ngo, ógbè dị na Brooklyn, New York, nke, n'ihi nrurukwu na enweghị ike nke ụlọ ha na enweghị ezigbo nhazi nke ndị isi, enwere mpaghara ịba ụba na mpụ ebe ndị nchekwa enweghị obodo bụ ihe egwu kwa ụbọchị.
A choro iji mee ka ụwa mara ọnọdụ a n'ụzọ na-agaghị ahụ ma ọ bụ bụrụ isi akụkọ nke akụkọ akụkọ echefuru na ụbọchị ole na ole. Communicationdị nkwukọrịta dị iche iche tụụrụ ime na agbanyeghị na atụgharịrị uche n'eziokwu ahụ egosiputara, a na-egosi ya n'ụzọ mara mma, na-egwuri egwu, nke "na-ejide" onye na-ekiri ya ma na-agbaji atụmatụ nke ememe na ụdị nke akụkọ-ụdị akwụkwọ akụkọ.
Maka ebumnuche a, onye ọ bụla bi na ya nwere ike ịmepụta akụkọ ya otu a na-akọ n'okpuru usoro “akwụkwọ mmekọrịtaNaegwuregwu docu-egwuregwu"(A na - eji ya eme ihe n'eziokwu na - egosi dị ka" Nwanna Nwoke ", dịka ọmụmaatụ) ebe ha nwere ike imeghee ebe obibi anụ ahụ ha site na igosipụta nrụgide kwa ụbọchị nke ibi na agbata a na ịkọ akụkọ. site n’uche ya. Ya mere, site na Mantle na Unitydị n'otu, ha enweela ike ịmaliteghachi ịchịkwa gburugburu ebe obibi iji kọọ akụkọ nke nwere ike ịgbanwe ohere ha ka mma.
Iji nweta ihe a na-akpọ onwe mgboroja ugboala, Mantle na-enye dị ka mgbakwunye uru ike ịkọwa ọtụtụ usoro inye nri (mgbakwunye) nke usoro edobere iji mepụta akụkụ dị mkpa nke mpaghara gburugburu iji dị ka "ngbasa ozi a kapịrị ọnụ" ma ọ bụ ntụpọ ojii mara nke ihe ọghọm nke nwere ike ịdị njikere. nye ọzụzụ na nkeji ma ọ bụ awa ole kama ụbọchị ma ọ bụ izu.Ihe omume ikpeazụ nke Kumar kwuru, bụ nke ụlọ ọrụ na-akpaghị aka. Kpọsị na enwere ike ịnya ụgbọ ala na-arụ ọrụ nke nwere ike ịnya ụgbọ ala. Mana, iji mepụta ma rụọ nnwale na oghere ịnya onwe ya, anyị kwesịrị ịma etu mmadụ si akpa àgwà n'ihu ụzọ. Anyi aghaghi i emuomi uzo mmadu ji ele ihe anya. Nke a na-ezo aka na ngalaba AI (Nzuzu nke artificial) nke gbadoro ịmụba akọnuche mmadụ. Na nke a anyị tinye Igwe ihe igwe n'ihi na igwe ga-enwe ike ịmata usoro omume site na onwe ha na ịkọ "omume".
Ma ebe ndị otu ụlọ ọrụ dị ugbua nwere nke abụọ nke aka ha na sistemụ igwefoto nke ụgbọ ala, enwere ike ị wepụta ha ozugbo na gburugburu Mantle na ohere nke ọhụụ na ụdị ọzụzụ.
Nzọụkwụ ahụ ga-ekwe omume ma nwee nchekwube ọdịnihu n'otu oge
Kumar kwubiri na “echiche ndị na-aga site na njịpụta simulator maka ule ịnya ụgbọ ala nke gụnyere algorithms, ruo n'ịrụ egwuregwu VR ebe ị nwere ike ịnọ ebe ọ bụla n'ụwa ma na-emikpu onwe gị na ahụmịhe ahụ chọrọ ụfọdụ ngwaọrụ. na ikike dị ukwuu. ”
Ọ bụ ezie na ọ nwere ike iyi ihe dị anya site na eziokwu anyị, eziokwu bụ na ahụmịhe dị. Mana, maka itinye ohere mbara igwe na gburugburu ebe obibi anyị kwa ụbọchị, ha chọrọ gafere ọ bụghị naanị sieve kamakwa ọ na-adọta uche nke ndị nwere ike ime ka ọrụ ndị a bụrụ nke dị adị.
Ọ bụ ya mere onye dere akwụkwọ ji sie ọnwụnwa ike:mfe"Ma"onye ọrụ". Mfe n'ihi na iji mee ka 3D Spatial nwee ike ịnweta, nke juru ebe niile ma baa uru, "a ga-wedata ihe mgbochi dị adị ma ọ bụ wedata iji nye ohere nnwale; ọ kwesịrị ịbụ 'mfe igwu egwu na dobe'. Mgbe ahụ, ọ na-agbakwụnye, "naanị mgbe ndị okike dị iche iche nwere ike ịnwale ma wulite ihe ngwọta na nyocha ndị ahụ n'ihe gbasara sekọnd, ọhaneze nwere ike irite uru"
Na mgbakwunye, 3D Spatial ga-agabiga sieve nke onye ọrụ, ya bụ, mgbe ndị ọrụ chọrọ ya kwa ụbọchị ma nwee ike iji ya mee ihe n'echeghị ya eche; Ọ bụ mgbe ị ga-etozu okè ma dịrị njikere maka ihe ị ga-eji eme ihe. Anyị kwuru banyere nnwale a ma ama nke Larry Page A ga-etinyere ya ma kwado ya
Ana m ajụ onye na-agụ Geofumadas, ị na-eduzi mbọ gị iji mezuo nke a mmuta ohuru nke anyị na-ezo aka n'ọrụ ọrụ gị?
Previous Post«Previous Teknụzụ geospatial, ọrụ ya na mkpa ya na ntọala IT na Ngalaba ationgbọ njem.
Next Post Họrọ onye na-eweta maka nnukwu ozi - ahụmịhe nke onweNext »